Ukuthengisa Nesevisi - I-Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
UKUDAYISWA KANYE NENKONZO
(1)Amamanuals for Recycling Machinery & Solutions:
I-Unite Top Machinery ihlinzeka ngemanuwali ecacile yomshini ngamunye ewukhiqizayo, ngoba siyakuqonda ukubaluleka komshini osebenza ngokugcwele, onokwethenjelwa wokugaywa kabusha.
Amamanuwali ethu emishini yokugaya abhaliwe futhi ahlelwa ngendlela okulula ukuyiqonda kubo bonke abasebenzi bakho. Lawa manuwali anemininingwane aqukethe izithombe eziningi nemidwebo ekhombisa ukusetshenziswa okufanele kwemishini yokugaya kabusha. Uma unemibuzo mayelana nokuqukethwe kwebhukwana? Sicela usithinte. Ngoba thina kwa-UNITE TOP MACHINERY siyaziqhenya ngekhono lethu lokunikeza isevisi yezimpahla.
(2) Ukulungiswa Kwezisetshenziswa Zokugaywa kabusha:
I-Unite Top Machinery inikeza isevisi ephelele yayo yonke imishini yakho yokugaya kabusha. Ochwepheshe bethu abanokuhlangenwe nakho bokulungisa ekufakeni, ekulungiseni, ekulungiseni, ekunakekeleni nasekulethweni kwezingxenye ezisele zomshini wakho wokugaya kabusha.
Isevisi ye-Unite Top Machinery yemishini yokugaywa kabusha isabalale eChina naphesheya kwezilwandle. Ochwepheshe bethu baneveni yesevisi ehlonyiswe ngokugcwele abanakho. Kumakhasimende aphesheya kwezilwandle, nawo alungele isayithi lakho onawo. Ngemva kokuba sebefikile esizeni, bangaqala ukusebenza ngokushesha ukuze baxazulule inkinga ngomshini wakho wokugaya kabusha.
Sesikulungele wonke amathuluzi adingekayo kanye nezingxenye ezidingeka kakhulu endaweni yethu yokugcina impahla. Inhloso yethu ukukukhulula kukho konke okukukhathazayo ngokuhambisana nomqondo wethu wesevisi ophelele.
(3) Ukulethwa Kwezingxenye Zomshini Wakho Wokugaywa Kabusha:
Izingxenye ezincane ezifana nezimpawu ezivame ukusetshenziswa ziyingxenye yohlu lwezimpahla ezijwayelekile kumaveni ethu esevisi. Ukushintshwa kwezingxenye zomshini ezinkulu kungase kudingeke ukuba kwenziwe efekthri yethu. I-Unite Top Machinery iletha izingxenye zemishini yokugaya kabusha kunoma iyiphi indawo emhlabeni. Ngoba siyakuqonda ukubaluleka kokusebenza okuhle komshini wokugaya kabusha. Ingabe udinga iseluleko mayelana nezingxenye ezifanele zemishini yakho yokugaya kabusha? Sicela uthinte omunye wochwepheshe bethu. Sizojabula ukukweluleka mayelana nezingxenye ezidingekayo ukuze ugcine imishini yakho yokugaya isesimweni esikahle.
(4)Izifundo Zokuqeqesha Emishinini Yokugaywa Kabusha:
I-Unite Top Machinery inikeza izifundo zokuqeqesha eziklanyelwe izisebenzi zakho. Izifundo zokuqeqesha ngokusetshenziswa kwemishini yakho yokugaya kabusha zingabanjelwa endaweni yakho noma endaweni yethu. Ukuze uqinisekise ukusetshenziswa kahle komshini wakho wokugaya kabusha. I-Unite Top Machinery ihlinzeka ngezifundo zokuqeqesha zezinga eliphezulu elifanayo nemishini yethu yokugaya kabusha.
Yonke i-Unite Top Recycling Machines kulula ukuyisebenzisa. Uchwepheshe wethu uzijwayeza ngakho konke ukungena nokuphuma komshini ngesikhathi sesifundo se-Unite Top Machinery. Izihloko ezinjengokuphepha, isevisi nokugcinwa kwazo kuxoxwa ngazo ngesikhathi sokuqeqeshwa.
I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya,